Ottoman-Turks - Wikipedia
Turki Ottoman (Turks Turks, Turki: Ottoman Turkleri) waxay ahaayeen dadweynaha Turkiga ku hadla ee Boqortooyada Ottoman, oo aasaasay saldhigyo milatari oo dawladeed iyo xukun dawladeed. Xogta la isku hallayn karo oo ku saabsan taariikhda hore ee Turkiga ee Ottoman waa mid aad u yar, laakiin waxay qaateen magaca Turkiga, Ottoman ("Cismaan") oo lagu khaarajiyey luuqadaha Yurubta ah "Ottoman"), oo ka yimid guriga Cusmaan I (oo idil 1299-1326) , aasaasihii boqornimadii oo xukumayay Boqortooyada Osman mudo 624 sano ah. Ka dib ballaarinta gurigeeda Bithynia, mabaadiida reer Ottoman wuxuu bilaabay inuu dhexgalo Muslimiinta kale ee Turkiga ah iyo Masiixiyiinta aan Turkiga ahayn, oo noqda Turjumaanka Turkiga iyo ugu danbeyntii Turki ee hadda. Turkiga Ottoman ayaa xannibay waddooyinka waddooyinka oo dhan Yurub iyadoo lagu guuleystey magaalada Constantinople, caasimadda caasimadda Byzantine-Bari ee Boqortooyada Midowday, iyo yurubiyanku waa inay helaan siyaabo kale oo ay ula macaamilaan wadamada Bariga.
"Ottomans" ayaa markii ugu horreysay loo yaqaanay Galbeedka qarnigii 14aad markii ay galbeedka u soo guureen boqortooyadii Seljuk, ee ku yaala Anatolia. Turki Ottoman wuxuu abuuray dawlad ku taal Galbeedka Anatolia oo hoos timaada Ertugrul, oo ah caasimadda Sögüt ee galbeedka Anatolia. Ertugrul waxa uu aasaasay mabaadii'da oo qayb ka ah xagjirnimada Seljuk. Wiilkiisa Cusmaan wuxuu balaariyay mabaadi'da; Boqortooyada iyo dadkaba waxaa loo yaqaan "Ottomans" by dadka reer Yurub ka dib ("Ottoman" oo ah musuqmaasuq "Cusman"). Wiilka Cismaanku wuxuu ballaariyay Boqortooyada Boqortooyada, oo la yiraahdo Nicaea (hadda jimcaha Iznik) oo ka tallaabay Daarellielladii 1362. Boqortooyada Carmalku waxay isu soo baxday markii Mehmed II uu qabsaday caasimada Boqortooyada Byzantine, Constantinople (Istanbul), 1453. ]
Boqortooyada Ottoman waxay u timid inay maamusho badmaaxyada Balkans, Cawadheer, Bariga Dhexe (oo laga reebo Iran), iyo Waqooyiga Afrika intii ay socdeen qarniyo dhawr ah, oo leh ciidan aad u fara badan iyo ciidan. Boqortooyada waxay sii jirtey ilaa dhammaadkii dagaalkii koowaad ee aduunka, markii ay ka adkaadeen malleeyshiyadii oo ay qaybsadeen. Ka dib dagaalkii Turkiga ee guulaystay ee ku dhamaaday dhaqdhaqaaqii qaran ee Turkiga oo la hakiyay inta badan dhulkii lumay Allies, dhaqdhaqaaqiina wuxuu joojiyay sultan sultanatkii November 1, 1922 wuxuuna ku dhawaaqay Jamhuuriyadda Turkiga 29-kii October, 1923-kii. Heshiiskii Sèvres oo ka wada xaajooday heshiiska weyn ee Lausanne, isagoo aqoonsaday aqoonsiga casriga ee Turkiga casriga ah, oo lagu magacaabo Misak-y Milli (Heshiis Qaran). Dhammaan dadka reer Ottoman ma ahan Muslimiin, mana ahan Muslimiintii Muslimiinta oo dhan oo Turki ah, laakiin ilaa 1923, inta badan dadka ku nool xudduudaha Turkiga cusub waxay aqoonsadeen Turki. (Meelo badan oo la xusi karo waxay ahaayeen kurdida iy
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Ottoman-Turks&oldid=175135"
Last edited on 28 Juun 2018, at 12:07
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 28 Juun 2018, marka ee eheed 12:07.